Home News Ciidamada dowlada Oo Dib U Furay Masaajido Ey Horay U Xireen Kooxda...
Ciidamada dowlada Oo Dib U Furay Masaajido Ey Horay U Xireen Kooxda Al Shabaab
Hawlgal gaar ah oo ciianka xoogga dalka Somaliyed ay ka sameeyeen maalmihii la soo dhaafay magaalada Marko ayaa waxaa lagu soo qab qabtay dhalinyaro 100 gaareysa.
Baaritaan dheer kadib ayay sarakiishu sheegeen in dhalinyarada intooda badan la sii daayay marka laga reebo 25 oo ay ku cadaatay Shabaabnimo, sidoo kale waxaa dagaal lagu soo qabtay Laba Shabaab ah, waxayna tirada guud ka dhigtay 27 nin oo Shabaab ka tirsan.
“Waxaan ka tirsaneyn Al Shabaab, ciidamada ayaa na soo qabtay annaga oo bamboo tuureyna, hada gacanta dowladda ayaan ku jirnaa, waxay ciidamada noo balan qaadeen in aysan na dhibaateyn doonin, waxaan sheegi doonaa saaxiibadeena kale halka ay ku sugan yihiin”. Ayay yiraahdeen labada dhalinyaro ee dagaalka lagu soo qabtay.
Saraakiisha waxay kaloo sheegeen in dib loo furay Masaajido ay xireen Shabaab oo dadka ay uu diideen inay ku tukadaan iyo suuqa magaalada Marko oo Shabaab ay u xireen lacagta ay u yaqaan Zakawaadka, kadibna uu dib u soo laabtay dhaq dhaqaaqa magaalada Marko.
Ciidan uu hoggaamninayay Abaanduulihii hore ee ciidanka xoogga dalka Gen. Cabdullaahi Cali Caanood ayaa 19-kii bishan la wareegay magaalada Marko oo muddo ay ku sugnaayeen Mintidiinta Ururka Al Shabaab, xaalada magaalada ayaa u muuqata mid hada ku soo laabatay sidii caadiga aheyd.
Previous articleAmniga magaalada muqdisho oo suu xumaanaya xilli ciidamo dhowr ah lagu soodaadiyay wadooyinka muhiimka ee caasimada
Next articleDowlada Jabuti Oo ku dhowaaqday in ay dekedaheedu ku filan yihiin inay haqab tiraan baahida dowlada Itoobiya u qabto inay dibada wax u dhoofiso ama dibadda ka soo degsato